अमेरिकाका कुन कुन राज्यमा गाँजाको कानूनी ब्यबस्था कस्तो ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
अमेरिकाका कुन कुन राज्यमा गाँजाको कानूनी ब्यबस्था कस्तो ?
कतिपय देशहरुमा प्रतिबन्धित लागू पदार्थको रुपमा व्याख्या गरिने गाँजाप्रति अमेरिकी मान्यता भने सामान्य बन्दै गएकाे छ । अमेरिकामा सरकारकै तर्फबाट गाँजालाई फरक नजरले हेर्ने गरिएकाे हाे ।
अमेरिकाको राजधानी वासिंगटन डि सी लगायत ३३ वटा राज्यमा गाँजालाई कानूनी रुपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य लागू पदार्थको प्रयोग र ओसारपसारलाई गैह्र कानूनी भनेपनि गाँजाप्रतिकाे कानूनी मान्यता दिन थालिएको हाे । गाँजा खुल्ला गरिएका राज्यहरुमा यसको प्रयोगको प्रकृतीमा भने बर्गिकरण गरिएको छ ।
अमेरिकामा २ प्रकृतिको प्रयोगमा गाँजालाई कानून सम्मत बिभाजन गरिएको छ । हालसम्म १० वटा राज्यहरुमा गाँजालाई मनोरञ्जन र औषधी दुवै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न खुल्ला गरिएको छ भने अन्य २३ वटा राज्यहरुमा औषधी प्रयोजनको लागि मात्र खुल्ला गरिएको छ ।
सबैभन्दा पछिल्लो पटक मिचिगन राज्यले गत बर्ष नोभेम्बर महिनामा २ दशमलब ५ आउन्ससम्म गाँजा खुल्ला रुपमा ओसार पसार गर्न पाउने र आफ्नै घरमा १२ वटासम्म बिरुवा लगाउन पाउने मापदण्ड तोकेर कानूनी व्यवस्था गर्यो। गत नोभेम्बरदेखि मिचिगनमा २१ बर्ष माथिका बस्यकले मनोरञ्जनका लागि समेत गाँजा प्रयोग गर्न पाउने भएका हुन् । गाँजा खुल्ला गर्ने मिचिगन पहिलो मध्यपश्चिमी राज्य हो । अमेरिकामा नै सबैभन्दा पहिला गाँजा खुल्ला गर्ने राज्य भने क्यालिफोर्निया हो । सन् १९९६ मा क्यालिफोर्निया राज्यले पहिलो पटक औषधी प्रयोजनको लागि गाँजा खुल्ला गरेको थियो । अहिले क्यालिफोर्नियामा गाँजाको खुल्ला बिक्री पसलबाट नै गर्न पाउने कानूनी ब्यबस्था छ । सन् २०१६ देखि क्यालिफोर्निया राज्यमा ८ ग्रामसम्म लिएर खुला हिड्न पाउने र २१ बर्ष माथिका बस्यकले गाँजा प्रयोग गर्न पाउने कानूनी ब्यवस्था छ । अलास्का राज्यमा पनि सन् २०१६ देखि कानूनी रुपका १ आउन्ससम्म खुला रुपमा बोकेर हिड्न पाउनु को साथै पसल नै खोलेर गाँजालाई खुला रुपमा बिक्री बितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
अमेरिकामा गाँजाको ईतिहाससँग जोडिएको अर्को राज्य हो ओरेगन । सन् २०१५ मा मनोरंजनको लागि पनि गाँजा प्रयोग गर्न पाउने कानून पास गरेको ओरेगनले कानून पास गरे यता ८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर गाँजाबात कर संकलन गरी सकेको छ । त्यस्तै औषधिको लागि गाँजा प्रयोग गर्न पाउने कानून सन् २०१२ मा बनाएको म्यासाच्यूसेट्सले सन् २०१६ मा मनोरंजनको लागि गाँजा प्रयोग गर्न पाउने कानून पास गर्यो । हाल म्यासाच्यूसेट्स राज्यमा १२ वटासम्म गाँजाका बिरुवा आफ्नै घरमा लगाउन पाईन्छ भने १ आउन्स खुला रुपमा ओसार पसार गर्न पाईन्छ । सन् २०१८ को सुरुमा नै बिधानसभाबाट कानून पास गरेर गाँजालाई मनोरंजन प्रयोजनका लागि खुल्ला गर्ने राज्य भर्मोण्ट हो । भर्मोण्टमा १ आँउन्स मात्र खुला रुपमा बोक्न पाइन्छ भने जम्मा २ वटा गाँजाका बिरुवा मात्र घरमा रोप्न पाइन्छ ।
गाँजा खुल्ला गरेर ट्याक्स धेरै संकलन गर्ने अर्को राज्य नेभादा हो । नेभादा राज्यले गाँजाबाट प्रति बर्ष २ करोड अमेरिकी डलर संकलन गर्ने आंकडा छ । नेभादामा २१ बर्ष माथिका बस्यकले मनोरंजनका लागि गाँजा प्रयोग गर्न पाउँछन भने १ आँउन्स खुला ओसार पसार गर्न पाउने व्यवस्था छ । वासिंगटन राज्यमा पनि गाँजा प्रयोग पुर्ण छुट छ । १ आँउन्स खुला ओसार पसार गर्न छुट भए पनि आफ्नै बारीमा बिरुवा रोप्न भने कस्तो रोगको औषधिका लागि हो पुष्टी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ।
उल्लेखित १० राज्यमा गाँजा पूर्णरुपमा खुला भए पनि मोन्टाना, नर्थ डकोटा, मिनियासोटा, उटाहा, एरिजोना, न्यू मेक्सिको, ओक्लाहामा, अर्कान्सास, मेरिल्याण्ड, रोड आईल्याण्ड, डेलावर ,न्युजर्सी, न्यूयोर्क, ईलिनोईज, फ्लोरिडा, ओहायो, वेस्ट भर्जिनिया, पेन्सिल्भानिया, कनेक्टिकट ,न्यूह्याम्पसायर, हवाई लगायतका २३ वटा राज्यमा औषधीजन्य प्रयोजनका लागि मात्र गाँजाको प्रयोग गर्न पाईन्छ । मनोरंजनका लागि यी २३ राज्यहरुमा गाँजालाइ कानूनले बर्जित गरेको छ । यद्यिप न्यूयोर्कका गभर्नर एन्ड्रु कुमो र न्यूजर्सी गभर्नर फिल मर्फीले भने सन् २०१९ सम्म गाँजालाई पुर्ण रुपमा फुकुवा गर्ने संकेत भने गरी सकेका छन् । अमेरिकाको छिमेकी राज्य क्यानडामा भने सिंगो देशमा गाँजा खुल्ला भै सकेको छ ।